बच्चामा मधुमेहको जोखिम बढ्यो : डा. सुभाना थापा - DURBAR TIMES
HomeHealthबच्चामा मधुमेहको जोखिम बढ्यो : डा. सुभाना थापा
बच्चामा मधुमेहको जोखिम बढ्यो : डा. सुभाना थापा
कोरोना महामारीको कारण बालबच्चा घरभित्र कैद छन् । उनीहरुको शारीरिक गतिविधि घटेको छ । अर्कोतिर अनलाइन कक्षाका साथै गेमिङ र सामाजिक सञ्जालले उनीहरुको ‘स्क्रिन टाइम’ बढाइदिएको छ । यसले उनीहरुमा मोटोपन र अन्य दीर्घ रोगको समेत जोखिम रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
डा. सुभाना थापा कार्की महाराजगञ्जस्थित कान्ति अस्पतालकी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हुन् । उनी पछिल्लो समय बच्चामा हुने मधुमेहको संख्या बढेको र कोरोनाको समयमा त्यो आँकडा झनै बढेको बताउँछिन् । तर यति नै संख्यामा बढ्यो भन्न सक्ने तथ्यांक भने तयार नभइसकेको उनको भनाइ छ । विगतमा मधुमेह बुढापाकाको रोग भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले भने युवा मात्र होइन, बालबच्चासमेत यसबाट सताइएका छन् । अझ कोभिड कालमा मधुमेह ग्रस्त बालबालिकाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
थापाका अनुसार पहिले पहिले बच्चाहरुमा मधुमेहको समस्या थोरैमात्रामा हुने गर्थ्यो। तर अहिले बच्चामा टाइप १ र टाइप २ मधुमेहका बिरामीहरु बढी देखिने गरेका छन् । अनुपातको हिसाबमा हेर्दा पछिल्लो समय बच्चाहरुमा टाइप १ मधुमेहका संख्या ८०-९० प्रतिशत छ भने बाँकीमा टाइप टु मधुमेह देखिन्छ ।
बच्चाहरुमा टाइप टु मधुमेहको समस्या पनि हुन्छ । बच्चामा हुने कुल मधुमेहमा टाइप टुको हिस्सा १० देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो समस्या बढीजसो मोटा बच्चाहरुमा देखिन्छ ।
कोरोना महामारीको समयमा किन मधुमेहका बिरामीहरु थपिए त ? डा. कार्की भन्छिन् ‘सामान्यतया कोरोना महामारी र मधुमेहको बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । मधुमेह, दादुरा जस्ता समस्या हुनेहरुलाई भाइरल इन्फेक्सनको बेलामा ती समस्या बढेर जाने गर्छ । तर मधुमेह र कोभिडको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन नभए पनि कोभिडले पनि भाइरल इन्फेक्सनमा जस्तै मधुमेह भएका बच्चाहरुमा जोखिम बढाएकोले हुन सक्छ, यसका बिरामीको संख्या बढेको छ ।’
मधुमेहले एकैपटक ठूलो असर नगरे पनि बिस्तारै बिरामीलाई गम्भीर समस्यातिर धकेल्दै लैजान्छ । त्यसैले कतिपयले यसलाई साइलेन्स किलरको रुपमा पनि मान्ने गर्छन् । थापाका अनुसार टाइप वान डायबिटिज इन्सुलिन हर्माेनको मात्राको कमीले निम्तिने समस्या हो भने टाइप टु डायबिटिज इन्सुलिनले पर्याप्त काम गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने समस्या हो । अर्थात् टाइप वान डायबिटिजमा इन्सुलिन कम उत्पादन हुन्छ । तर टाइप टु मधुमेहमा इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ तर त्यसले राम्रो काम गर्न सक्दैन ।
Previous articleदाङमा इमरजेन्सीबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिने
Next articleनर्भिकको हेल्थ प्याकेज सार्वजनिक